Type above word in
Use Zawgyi Keyboard
Rabbit: အကို Shwekayin ရေ ကျေး ဇူး အရမ်း တင်ပါ တယ် ရှင် ရသွား ပါ ပီ mysqli_set_charset($con,'utf8'); လို. ရေး လိုက်ပါ တယ် utf8 က အ နောက်မှာ ထား ရေး ရမှာ ကို အ ရှေ့မှာ မှားရေး မိ နေတာပါ ကျေး ဇူး အရမ်းကိုတင်ပါ တယ်
Rabbit: အကို Shwekayin ရေ ကျေး ဇူး ပါ မ ပေါ် သေး ဘူး အကို ရေ တခြား နည်းလမ်း လေး များ ရှိလား ရှင့် အကိုစမ်းကြည့် တာ ရောရလား ရှင့်
Kyaw Zin: PHP ကို ဘယ်မှာ ဒေါင်း လို့ရနိုင်သလဲခင်ဗျာ...
Shwekayin: charset="utf-8" ဆိုတာ meta tag ထဲ အရင်ထည့် ကြည့် ပါ
Shwekayin: ဆိုတဲ့ ကုတ် html meta tag တွေ အထဲ အရင်ထည့် ကြည့် ပါ
Shwekayin: Rabbit ရေ ပထမဆုံး အ နေ နဲ့ html code အထဲမှာ ဆိုတာထည့် ကြည့် ပါ ။ အဲ့လိုထည့် လို့မှ ဇော်ဂျီ ဖောင့် တွေ ?? နဲ့ ပေါ် နေ သေး ရင် mysql connect လုပ်တဲ့ နေရာမှာအောက်က ကုတ် အတိုင်း ထည့်  ရေး လိုက်ပါ ။ $link = mysql_connect('localhost', 'user', 'password'); mysql_set_charset('utf8',$link);
Rabbit: mysql db က data တွေ ကို php နဲ့ ဆွဲထုတ်ရာမှာ myanmar font တွေ ဆို ??? တွေ နဲ့ ပြ နေပါ တယ် ဘယ် လို ဖြေရှင်း ရမလဲရှင့်
MoeThidaKhaing: When will you come back to Yangon, brother?
koko: I am in USA for the moment, sorry
MoeThidaKhaing: Plz call me sir koko...09455101593
MoeThidaKhaing: But, I can't to contact your phone.
MoeThidaKhaing: Sir, I want to learn LAMP(Linux, Apache, Mysql, Php). But, I can
Zwe Htet Aung: Thank
Hun Thar: hello
Security: check your mail koko@phpmyanmar.com
ဟိန်းစည်: အထူး ကျေး ဇူတင်ပါ တယ် အစ်ကို ရေ
Paye Phyo:: Thanks you very much for your PHP lecture.
koko: Type in "web design themes" in google search and you will seealot
Neh Reh: I am looking for easy web design styles. I did not see it even if every blogs and webs were been searched. Can you help me? I would like to haveabeautiful web as well as blogger.
Neh Reh: What trainings are given?
koko: The page is active and training courses are still given
hz: ဒီ page က active ဖြစ် သေး လား မသိဘူး .. သင်တန်း ရော စုံစမ်း ချင် လို့...
phyo: မြန်မာများ အတွက် http://www.shweverts.com/?ref=myanmarptc
minminoo: http://www.developer.facebook.com မှာ Register လုပ်လို့ မရ လို့ပါ ကျွှန် တော့ အ ကောင်မှာ ဘာ တွေ လုပ်ရမှာ လည်းကူညီကြပါ
herz: မြန်မာစာ အက္ခရာစဉ်စနစ်ကို ပထမဆုံး ထည့် သွင်း ပေး ထား တဲ့ Database system အ ဖြစ် Mariadb 10.0.10 stable version ထွက်ပြီ https://downloads.mariadb.org/mariadb/+releases/
may.wytu@gmail.com: ညမက အခု Webdesinger ပါ ။ ဒါ ပေမယ့် webdevelopement ပိုင်း ကိုလည်းပိုစိတ်ဝင်စား လို့ တက်ချင်ပါ တယ် ၊
koko: Programming Languages တွေ ဟာ ဆင်ဆင် လေး တွေ ပါ ဘဲ တစ်ခုကို ကောင်း ကောင်း နား လည် ရင် အသစ် တစ်ခု ကို မှ န်း ဆ နိုင်ပါ တယ်
Phyu Phyu Shein: ညီမက အခု java ကို လေ့လာ နေပါ တယ် ... အခုphp ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ဆက်စပ်မူရှိလား
khing zaw moe: ကောင်း ပါ တယ် ဆက်ပြီး ကြိုး စား နိုင်ကြပါ စေ
Shwekayin: ဒီဆိုက်က နေ ကျွန် တော် php လေ့လာတာမို့ အကြံတစ်ခု ပေး ပါ ရ စေ.. ဆိုက်က sql ပေါ က် နေပါ တယ် .. http://phpmyanmar.com/php_tutorial/article/9' အဲ့ နေရာမှာ ပေါ က် နေတာပါ .. Error base နဲ့ Injection ထိုး လို့ရပါ တယ် .. ဒါ ကြောင့် အမြန်ပြုပြင် ပေး ဖို့ အကြံ ပေး ပါ ရ စေ.
စိုင်းလုံ: php ကို advend စာ အုပ် လေ့လာချင်ပါ တယ် .။
Tulum: Thank you so much.
thura: ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ဒီ Site လေး ကိုလာကြည့် မှ ပဲ Php အ ကြောင်း တော် တော် လေး သ ဘော ပေါ က်သွား တော့တယ် ဆက်ပြီး လုပ်ပါ ဦး ။
saitheintun: ပညာရှင် တွေ ကို လေး စား တယ်
thanhtike888@gmail.com: ကောင်း ပါ တယ်
hlaingwinhtut: ဟုပ်ကဲ့ Phone No. ယူသွား ပါ တယ် ..
ye naing tun: How to learn it online?
Edward: php_tutorial/article/32 မှာ မြန်မာ လိုမရှိ သေး ဘူး နော်, Bro :)
Edward: Thanksalot :D bro
ko ko: For Edward-you can send an email to koko@phpmyanmar.com
Edward: Hello Admin, how can I contact you from online or social website ? Please let me know :) Thanksalot
saitheintun: လာလည် သွား တဟ်thanyou.umhqhr
ကောင်းရယ်ဟိန်း: အရမ်း ကောင်း ပါ တယ် ... အား ရင်း လည်းသင်တန်း လာတက်ပါ ဦး မယ်
demon: PHP နဲ့ ပက်သက်တာ လေး တွေ တင်ထား ပေး တာ ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ဘရို
တꨯးပꨤင်ꨀုမ်လွတ်ꨳလꨰဝ်း: တꨯး ပꨤင်ꨀုမ်လွတ်ꨳလꨰဝ်း ꨟဝ်း ꨟူမ်ꨳꨅူမ်း ꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨳယူꨲꨁုꨳ မ်ꨮꨲသုင်ꨁုꨳ။ www.taimeetingfree.com
မုတ်သုံမိုးဇက်: အကို ကျ နော် လာပြီ လေ့လာသွား ပါ တယ် ကျေး ဇူး ပဲ ကျ နော့ chitkoko.ckk2013
phothar: add friends buttons လေလုပ်ချင်လို့ပါ ဘယ်လိုများ database ဆောက်ရလဲမသိဘူး ..facebook လိုမျိူး ပေါ့ ...
koko: database မှာ font မရှိပါ ကြိူက်သ လို ရေး ထဲ့ လိုက်ပါ database ထဲ အ လို လို ဝင်သွား ပါ လိမ့်မည်
hi: sql database က နေ့ zawgyi one ကို ဘယ်လိုက query statment တွေ နဲ့ ပြန်ထုတ်နိုင်မလဲ့.. php နဲ့ မြန်မာလို့ site လေး ရေး ချင်လို့ပါ
koko: ဒီ site မှာ အသင်း မရှိပါ
KHINMGTHAN: အသင်း ၀င်မရ
Sai Thu: I sent you an email bro. Could you please explain me how to embed myanmar unicode font for PHP Website.
aungaung: ကျွန် တော်တို့ အတွက် စာ အုပ် တွေ သာ အား ကိုး နေရတာ ဖြစ် လို့ "->" " :: " စတဲ့ သ င်္ကေတ တွေ ကိုဘယ် လို အသံထွက် ခေါ် ဝေါ်ရမှ န်း မသိဘူး ဖြစ် ရပါ တယ် ။ ဘ လော့သပ်သပ်တင် ပေး ရင်လည်းကောင်းပါ တယ် ။ တောင်း ဆိုပါ ရ စေ ။
koko: for Sai Thu - please send an email to koko@phpmyanmar.com so that I can explain to you in detail.
Sai Thu: Hello brother, can you please let me know how to use burmese language in PHP website
အောင်စိုးဝေဦး: ဆက်သွယ်ရန် aungsoewaioo814@gmail.com
အောင်စိုးဝေဦး: သင်တန်း အ ကြောင်း နည်းနည်းရှင်း ပြ ပေး ပါ လား
kyawzin: to all >>phpmyadmin မှာ မြန်မာ font သုံး ချင်လို့ပါ အဆင် ပြေမယ့်နည်းလမ်း ကို ပြောပါ ပေး ပါ လား ခင်ဗျား
ခေမာသော်: Forum က၀င် လို့မရပါ ဘူး ဒေါင်း လုပ်ဖိုင်တဖိုင်ကျလာတယ်း( ဒီဆိုဒ် လေး ကိုဒီ နေ့မှ တွေ့ မိတယ်
AKT: အစ်ကို ကျေး ဇူး ညီလာပြီး လေ့လာသွား ပါ တယ်
john4: နည်းနည်းလောက်ထက်ပြီး တော့ ရေး ပေး စေ လိုပါ တယ်
paingsoethu: php သင်ခန်း စာများ ကိုဆက်လက်တင်ပြ ပေး ပါ ၇န် အစ်ကိုတို့ခင်ဗျာ
koko: For Anther - Hit counter ကိုအထူး ရေးနေ ရန်မ လိုပါ၊ video.phpmyanmar.com ကိုသွားပါ။ ၄င်း site ရဲ့ အောက်ဆုံး အထိ (footer) ဆွဲချပါ။ အဲဒီမှာ Unique Visitors ဆိုတဲ့ word ကိုတွေ့ ပါမယ်။ 633,300 ဆိုတဲ့ hit number ကိုတွေ့ပါမယ်။ အဲဒီ number ကို click လုပ်ပါ။ video.phpmyanmar.com ရဲ့ site traffic အသေးစိပ် ကိုတွေ့ ပါမယ်။ sitemeter.com ရဲ့ Web Services ကိုသုံးထား တာပါ။ Member (free) ဝင်ပြီး မိမိ site အတွက်၊ သုံးနိုင် ပါတယ်။
Anther: hit count ကို php နဲ့ ရေး ချင်ပါ တယ် ....site ပေါ်မှာ ပေါ်ချင်ပါ တယ် ....... code လေး သိချင်ပါ တယ် .....
zatkaung: မန်ဘာဝင်ချင် လို့
Aye Co: ကျွန် တော့ e-mail ---Ayecocoster@gmail.com ကိုပို့ ပေး နိုင်ရင် ကျေး ဇူး အများ ကြီး တင်ပါ တယ် ။
Aye Co: ကျွန် တော်က PHP + Ajax ကိုသုံး ပြီး dataBase ထဲက Data ကိုဆွဲထုတ်ပါ တယ် ။ ပြီး တော့ xml File တစ်ခု create လုပ်ပြီး client side ကိုပို့ပါ တယ် ...ဒါကို Java Script က ဖတ်ပြီး တော့ Html tag ကို convert လုပ် ပေး ပါ တယ် ..... အထက်မှာ ပြောသွား တာ တွေ က Ajax ရဲ့ Procedure တွေ ပါ .. အဲ့ဒီမှာ ပြဿနာက Database ထဲ က Data မှာ Html tag တွေ ပါ တော့ PHP က ဆွဲထုတ်ပြီး xml ပြောင်း တဲ့ အခါမှာ Error တက်ပါ တယ် ... အဲ့ဒါကို..ဘယ် လို convert လုပ်ပြီး xml File ကိုထုတ် ပေး ရမယ်ဆိုတာ......သိရင် ဖြေကြား ပေး စေ လိုပါ တယ် .... ကျေး ဇူး အများ ကြီး တင်ပါ တယ် ။
mgmgzar: I Love PHP
ကျော်မင်းလွင်: ကောင်း တယ် ဗျ.... sample project လေး တွေ ပါ တင် ပေး ရင်ပို ကောင်း မယ်
akarphyoe: ကိုယ်ပိုင် ၀က်ဆာဗာပြုလုပ်ပုံ နဲ့ php ကုဒ် တွေ ထည့် သွင်း ပုံကို သိချင်ပါ တယ် အပင်မကြီး လျှင် whereheart8@gmail.com ကို မေး ပို့ ပေး စေချင်ပါ သည် လေး စား စွာ အကူ အညိ တောင်း ခ့ အပ်ပါ သည် http://akarphyoe.mixxt.at
mayzwei: အရမ်း ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ်
koko: for mgmg - data က တော့ local က နေ export (.sql) ဖိုင်ကို create လုပ်ပြီး online က database ထဲကို inport လုပ်ပါ
koko: for mgmg - ဒီ site ဟာ local မှာ ရေး ပြီး online ကို ပြောင်း ထား တဲ့ site ပါ ။ hosting server က cpanel မှာ ဝင်ပြီး empty database တစ်ခု create လုပ်ပါ database name ကိုရမယ်။ user name နဲ့ password က တော့ cpanel password နဲ့ အတူတူ ဖြစ် ဖို့ များ တယ် ။ ပြီး ရင် php file မှာ mysql_connect() function မှာ database-name, user-name နဲ့ password ထဲ့ လိုက်ရင် connection ရသွား ပါ လိမ့်မယ်။
mgmg: php file တွေ ကို local ထဲမှာ database နဲ့ ချိတ် လိုရတယ် အွန် လိုင်း ပေါ်မှ ချိတ်တာ အဆင်မ ပြေဘူး ဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီ ပေး ပါ အုံး ခင်ဗျာ
myint than: my learning is just started now
လင်းပွင့်ကြယ်: php မြန်မာ လို လိုချင် လို့ ပေး ကြပါ
myat: ကျွန် တော်က java ကို လေ့လာချင် လို့
koko: for WYTU သား လေး - pdf တွေ တင် ပေး မယ် နော်၊ နည်းနည်းတော့ အချိန် ပေး ပါ ...
WYTU သားလေး: အကို ရေ Tutorial တွေ ကို ကျ နော်တို့လိုကွန် လေး တဲ့ နေရာ တွေ မှာ လုပ်ရတာခက် လို့မီး ပျက်လဲဖတ် လို့ရအောင် ပရင့်ထုတ်ချင်ပါ တယ် PDF လေး တင် ပေး ပါ ဗျာ
cta: http://phpmyanmar.com/ php_tutorial ဒီလင်. လေး မှာ လေ.လာ လိုက်ပါ မယ် ကျေး ဇုး တင်ပါ တယ်
cta: ကျ နော် Php ကို လေ.လာချင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ ကျေး ဇုး ပြုရှုိ ဘယ်ကစ လေ.လာရမယ် ပြေား ပြ ပေး ပါ ခငိ ဗျာ
ရှင်ပညာသာရ: ကျေး ဇူး ပါ ပဲ ဗျာ
myotayzarlat: This isablog to look
lwinmyothu: I am now working as web provider inacompany.....! And I need to study more in PHP!!!!!Thank You so much//
mee mee: word file upload လုပ်တာ မြနိမာနံမည် နဲ့ သိမ်း မရ လို့
lhu lhu: ခု လို ဆိုဒ်မျိုး ကို update ဖြစ် နေအောင်တင် ပေး နိူင်ရင် အများ ကြီး ကောင်း လိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါ တယ် ....
မိုးလုံး: Php သင်ခန်း စာ တွေ များ ကြီး တင် ပေး တဲ့ အတွက် ကြောင့် အများ ကြီး ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ။ ဒီထက် advance ဖြစ်တဲ့ သင်ခန်း စာ လေး များ ရှိရင်လဲ ဖေါ်ပြ ပေး စေ လိုပါ တယ် ။
koko: For thandar - You can studyamail example here. http://bit.ly/bZQUNu
thandar: php page က နေ registration complete ဖြစ် ရင် User ကို comfirmation letter with username and password ကိုemail ဘယ် လို automatically ပို့ရမှာ လဲ
thandar: how to send confirmation via gmail
purple snake: ကျေး ဇူး အရမ်း တင်ပါ တယ် ဗျာ...
leo.mikeleo: If I get computing wellalot of webite will be created and some of myanmar messages will be distributed to the people. Although I have witten this message just now, I set dowm my head because of my poor computing.
nyiminkha: အင် ဇော်ဂျီ နဲ့ ရေး ပါ တယ် ဆိုမှ
pupot.exe: This is the great preacious for PHP Dummies....good..hang on
Kiru: အစ်ကိုတို့ ရေ... ဖြစ် နိုင် ရေ..PHP Exploit လေး တွေ ..တင် ပေး လေ...
malthidarj@gmail.com: I want to friendship....So...
myatthidar: I want to study this site..
Chit su: Hi ! everybody :) Php အ ကြောင်း ကို အရမ်း စိတ်ဝင်စား ပါ တယ် self-study လုပ်ချင်ပင်မယ့်ဘယ် လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး ဖြစ် နေ လို့ intall esay php software package ကလဲ ဖွင့် လို့ မရဘူး ဖြစ် နေတယ် connection ကြောင့်လား တော့မသိဘူး Page not Found ဖြစ် နေတယ် ဒီsite ကို အခုမှ စ လေ့လာတာ ဖြစ် လို့ တတ်နိုင်သ လောက် လေး ကူညီပြီး ပြောပြ ပေး ကြပါ ဦး နော် အား လုံး ကို ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် :) :)
brownbear: Shelar, Here downloadlink for Xampp http://sourceforge.net/
jum: php ကိုစိတ်ဝင်စား တဲ့ သူ တွေ နဲ့ ပေါ င်း ပြီး OJT လုပ်ချင်ပါ တယ်
jum: i like this site because i interesting php .i have made OJT with php before but i want to know more than thus i trying to study knowledge deal with php that i have not known.
khinsanhlaing: thank for ur site
jum: i am very much interested in php
nyiminkha: လာ ဖြစ် တာက တော့ ခဏခဏပဲ ဗျာ ခုမှ ပဲ ရေး ဖြစ် တော့တယ်
koko: for သံ ယောဇဉ်မင်း - I like your idea, please contact koko@phpmyanmar.com
သံယောဇဉ်မင်း: ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ခင်ဗျာရှင်း ရှင်း လင်း လင်း ရေး ပေး ပါ ဦး ပြီး တော့အွန် လိုင်း သင်တန်း လေး ဘာ လေး လုပ်ပါ လေ စပွန်ဆာရှာ ပေး ပါ့ မယ်
yamin (www. hlayamin .com): ပညာ အများ ကြီး ရရှိတဲ့ နေရာ လေး တစ်ခု တွေ့ ရှိခဲ့ ပါ တယ် ။
Tinzar: So good.I respect you.May you be happy and success in your life.
komyo: ကောင်း ပါ တယ် ၊ အသုံး လည်းဝင်ပါ တယ် ၊php tutorial မှာ မြန်မာလို တွေ အကုန်ဖြည့် နိုင်ရင်ပို ကောင်း ပါ တယ် ။
Minn: Hi, Today is the first time I am looking at your web site and it really cool for our Myanmar IT people. Thanks So much for all your affort. Minn
ဒေါက်တာ အောင်ဝင်းထွဋ်: ကျေး ဇူး တင်တယ် ဗျို့။ ပညာ အများ ကြီး ရ လို့ လေး စား မိပါ တယ် ဗျာ။
koko: for phptweety - 30 percent လောက် တော့ ရပြီး ဆိုပါ စို့
phptweety: php & sql ကိုပဲ လေ့လာမယ်ဆိုရင် programmer လုပ်ဖို့ လုံ လောက်ပီလား? web developer အနေနဲ့ပေါ့
fokhwar: တွေးထား တဲ့ စိတ်ကူး ရေး ထား တဲ့ article တွေ ကို တော် တော်သ ဘောကျတယ် ဗျာ
koko: for wailynnoo - ဆောင်း ပါးနည်းနေ သေး လို့ RSS မထည့် သေး တာပါ
wailynnoo: ဘာ လို့ RSS ထည့် မထား တာလဲ
phyo: Thanks for your dicussing from barcamp. I like barcamp & I want to meet next time/next barcamp. Thanks!!! SAYA U HTAY WINN
phyo: My first time to learn of php & I want to beaweb-designer. How can I to do & have we got chance for designer in our country. we are finish from Dip.CA 2008-2009
phyo: I want to study of PHP Language.
ms.aconite@gmail.com: PHP နဲ့ ပါ တ်သက်ပြီး လေ့လာဖု့် E book ရှိရင်လိုချင်ပါ တယ် ရှင်မြန်မာလိုဆိုပို ကောင်း ပါ တယ်
pwintkhinezin: ဆရာရဲ့ presentation ကို barcamp မှာ နား ထောင်ခဲ့ရပါ တယ် ။ ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ဆရာ။ php ကိုသင်တန်း တက်ဖူး ပါ တယ် ။ ဒါ ပေမယ့် လက် တွေ့  တော့သိပ်မ ရေး ဘူး သေး ပါ ဘူး ၊PHP group ကိုစိတ်ဝင်စား ပါ တယ် ဆရာ။
koko @ Htay Win: for Myanmar-Myanmar.com -ွှThanks
zatlatwar: pHp ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။ ကူညီကြပါ အုံး ။ ကျေးဇူး တင် ပါတယ်။
Myanmar-Myanmar.com: Hello Sayar U Htay Wynn your site is listed here in our Myanmar Web Directory
ဇူး ဇူး : ဇူး လာသွား တယ် ဦး ရေ။ မှ တ်မိရဲ့ လား Barcamp မှာ တွေ့ တဲ့ကောင် လေး တွေ ပါ ။ PHP ကို အ ခြေခံက စပြီး လေ့ လာချင်ပါ တယ် ။ အဲဒါဦး ညွှန်း ပေး ပါ ဥိး ခင်ဗျ။
loiyo2010@gmail.com: ကျွန် တော်က ခုမှ ဒီဘာသာကိုစတင် လေ့လာ နေတာပါ ဘား ကမ့် မှာ ဒီဆိုက် admin ရဲ့ presentation ကိုနား ထောင်ခဲ့ ပါ တယ် PHP group လေး တစ်ခု ဖြစ် ဖို့တတ်နိုင်သ လောက်ကူညီပါ မယ်။
Tavoyan: PHP myanmar Admin များ ခင်ဗျား ... လေး စား စွာဖြင့် စာ ရေး အပ်ပါ တယ် ။ ကျ နော်တို့လို Self-study သမား များ အတွက် ခင်ဗျား တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ အလွန် အဖိုး တန်တဲ့ ဝက်ဆိုက်ပါ ခင်ဗျား ။ ဒီထက် ပိုမိုရိုး ရှင်း ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင်မြင်တဲ့ ဆိုက်တခု ဖြစ် လာပါ စေ ကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါ တယ် ။
shelar: အစ်ကို ရေ xampp-win32-1.5.5. softwar လိုချင်ပါ တယ် အဆင် ပြေရင် တင် ပေး ပါ နော် လင့် တွေ က ဒေါင်း လို့လည်းမရဘူး ကူညီပါ အုံး အပြင်မှာ ၀ယ်တာလည်းအဆင်မ ပြေဘူး
lunatheroo: help me please
ko lat: စာဖတ်၇တာ ကောင်း ပါ တယ်
laminlay: ကျေး ဇူး အများ ကြီး တင်ပါ တယ် ဆရာ
coolkaytara: ဒီ နေ့မှ engineer4myanmar.com က နေ ဒီဆိုဒ်ကိုသိခဲ့ တာပါ .. ကျွန် တော်လဲ PHP ပိုင်း ကို စိတ်ဝင်စား တော့ အရမ်း အဆင် ပြေတယ် ဗျာ .. ကျေး ဇူး လဲ တင်ပါ တယ် .. နောက်ပိုင်း ရောက် ဖြစ် မှာ ပါ ...
koko: Article တစ်ခုချင် အ လိုက် comments ရေ လို့ ရအောင်ဖွင့် ပေး လိုက်ပါ ပြီး
moeswe: အချိန်ရတိုင်း ခဏခဏ ၀င်ကြည့်ဖြစ် တယ် အခု လို အ လေး ထား ပြီး ပြန် ဖြေ ပေး တဲ့ အတွက် ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ်
arakan: အသင်း ၀င်ချင်ပါ တယ် ဘယ် လိုလုပ်ရမလဲဘာ တွေ လို အပ်သလဲ ကျေး ဇူး ပြုပြီး လမ်း ညွှန် ပေး ပါ
koko: for moeswe - ဘာသာပြန်တာ အမြန် လုပ်ပါ မယ်၊ အလုပ် တွေ များနေ လို့ ပါ ။
theingi: php ကို လေ့လာချင်ပါ တယ် ဒါ ပေမဲ့ ဘယ် လို လေ့လာရမယ်ဆိုတာ ပြောပြ ပေး ပါ ဦး
moeswe: စိတ်ဝင်စား လို့ လိုက်ရှာရင်း ဒီဆိုဒ် လေး ကို တွေ့ ပါ တယ် မြန်မာဘာသာ နဲ့ ရှင်း ပြထား တော့ တော် တော် လေး လေ့လာရတယ် လွယ်ကူသွား တယ် သင်တန်း ကြေး တွေ ကများ အချိန်ကမ ပေး နိုင် တော့ ဒီဆိုဒ် လေး မှာ ဘဲ သင်ယူချင်ပါ တယ် မြန်မာဘာသာပြန်တာကို ပြီးအောင် ပြန် စေချင်ပါ တယ် ကျေး ဇူး တင်စွာဖြင့် အသင်း ၀င်ချင်ပါ တယ်
kosoe: ဘယ်လို လေ့လာရတာလဲ ပြောပြပါ ဦုးkosoe.ktk
koso: ကျွန် မေး ချင်တာ တွေ ဘယ်သူ့ကို မေး ရမှာ လဲ အခုမှ စကြည့် တာဆို တော့
koooo: myanmar1 to myanmar2,3,win fornt conventer အခက် အခဲ ဖြစ် နေတယ် ၊ ရှိတဲ့ နေရာသိရင်ညွန်း ပါ အုံး ၊ ရှိရင်ကူညီပါ အုံး ဗျာ
soemoe: သင်တန်း မတက်နိုင် လို့ ကွန်ပျူတာ အ ကြောင်း ကို လေ့လာချင်တယ် ဘယ် လို လေ့လာရမလဲ
Koala: တော် တော် လေး ကောင်း တဲ့ siteပါ .. မြန်မာsite ရှိတာ တော် တော် အဆင် ပြေသွား တယ် သင်တန်း မတတ်နိုင်လို့ စိတ်ညစ် နေတာခုမှ အား လုံး အဆင် ပြေသွား တော့တယ်
Pascal: i use xampp :) Easy to install
koko: for -ကို နေ စေး -ကြိုက်သ လိုကူး နိုင်ပါ တယ် ။ koko@phpmyanmar.com သို့ email ပို့ပြီး ဆကိသွယ်ပါ ၊ ကျွန် တော် လည်းအသင်း မှာ ပါ လိုပါ တယ် ။ ပူး ပေါ င်း ဆောင်ရွက်ကြတာ ပေါ့ ။
နေ စေး ( problemclean.ning.com ): အဲဒီ အသင်း မှာ ..ဒီက ပညာ၇ပ်ဆိုင်ရာပို့စ်များ ကိုကူယူ ဖော်ပြခွင့် ပေး စေလိုပါ တယ် .. အသင်း ၀င် 117 ယောက်ရှိပါ တယ် .. ဒေီဝက်ဆိုက်လင့်ကိုလည်းမြန်မာWEB developer အသင်း မှာ ဖော်ပြ ပေး ပါ မယ် .. ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ .သွား ချင်ရင် လင့် လေး က တော့ http://problemclean.ning.com/group/phpwebdeveloper
နေ စေး ( problemclean.ning.com ): ကျွန် တော် .. PHP တိုး တက် စေ ရေး အတွက် ..နည်းပညာဝက်ဆိုက်မှာ အသင်း လုပ်ထား တာကြာပါ ပီ ..
Nan Myint: ခုမှ စတင် လေ့ လာတာဆို တော့ အမြင်မ တော်ရင်ကူညီ ပေး ကြပါ ။ သင်တန်း မတက်နိုင်တဲ့ သူပါ ။ သနား ကြပါ ။
Nan Myint: ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ။
Nan Myint: Thanks ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
sandar: i use pure php and php with joomla. all friends can discuss me (sandarminaye.ucsyctgirl@gmail.com) and u can learn PHP at this website also http://www.w3schools.com/.
yanaing: ကူညီပါ နား မလည် လိုပါ
sithuwin: ဒီဝဒ်ဆိုဒ်ကိုနား လည်အောင်သင်ချင်ပါ တယ် ကူညီကြပါ အခုမှ လေ့လာသူပါ
Yee: I'd like to know about CSS in detail
ShweHtateHtar: IIS နဲ့ အတူ Apache ကိုvistaမှာ runနိုင်အောင် permission ပေး ရတာ လေး ပြောပြ ပေး ပါ
yupar: my mail is poohlay24@gmail.com
yupar: gmail ထဲမှာ လို စာ ရေး တဲ့ မေး box ထဲမှာ စာမပါ ဘဲ mail ကို send လိုက်ရင် text plain area , mailစာ ရေး တဲ့ထဲမှာ စာမပါ ဘဲ sendမှာ လား ဆိုပြီး ok, cancel ဆိုပြီး message box ပြအောင် php နှင့် ဘယ် လို ရေး ရမလဲ. ကျေး ဇူး ပြုပြီး ဖြေ ကေး ပါ ဦး ။
sandarwin: i amasenior web developer so,I want to know about of php .net ,Please! give me useful ebook of php link ,Thank you very much
Jseagull: @R, thz million, i can do it..
R: @Jseagull, it's recommended to use database char set as UTF-8 Unicode (utf8)
လူထက်: php နဲ့ပတ်သက်တာ လေး တွေ သိချင် လို့
Jseagull: database ထဲကို မြန်မာစာထည့် ချင် လို့ ပါ ။ ဘယ် လိုလုပ်ရပါ သလဲ။
iterayouth@gmail.com: PHP ဆိုတာဘာကို ပြောတာလဲ သိချင် လို့ပါ ............
goldmyanmar.myanmarbloggers.org: Nice site!
shwemyanmar: good site. I like your site.
မိုး ထက် အိမ်: နောက်တစ် ခေါက် သေချာပြန်လာလည် မည် ...
Min Htet: ကျွန် တော်PHP ကို အခုမှ စတင်ပြီး လေ့လာသူပါ ...PHP ကိုကျွမ်း ကျွင်စွာတက် လိုပါ တယ် ... မေး က july.htet1@gmail.com ပါ ဗျာ
Min Htet: ကျွန် တော်PHP ကို အခုမှ စတင်ပြီး လေ့လာသူပါ ...PHP ကိုကျွမ်း ကျွင်စွာတက် လိုပါ တယ် ... မေး က july.htet1@mail.com ပါ ဗျာ
Nay Myo: yea I 'd like to read and study on processing of Php programming .But I don't know How to start learning.So I hopr this site will help that to increase the my knowledge .
waiyanlin@gmail.com: php software ကို ဘယ်က ဒေါင်း လုပ် ဆွဲနိုင်ပါ သလဲ။
yamin: အရမ်း ၀မ်း သာပီတိ ဖြစ် မိပါ တယ် ကျေး ဇူး လည်းတင်မိပါ တယ် ။
သန်း ထိုက်: ကျွန် တော် Php ကိုဝါသနာပါ တာကြာပါ ပြီ ဒါ ပေမဲ့ မ အား လို့အခုမှ စလုပ် ဖြစ် တာ ကူညီ ပေး ကြပါ အုံး
မော်တာ: ခုလို CSS နဲ့ PHP tutorial ကို မြန်မာလို ရေး ပေး တဲ့ အတွက် အများ ကြီး ကျေး ဇူး တင်ပါ တယ် ရှင်...
မော်တာ: အခုချိန်ကစပီး .. ဒီဆိုဒ်ကို နေ့တိုင်း ဖွင့် တော့မယ်..
Aung Naing Lynn: php က တော့ အခုမှ စမှာ အကူ အညီ လေး ပေး ကြပါ aungnainglynn@gmail.com
khitkhamkong: မင်္ဂလာပါ လာ ရောက် comment တွေ ဖတ်သွား ပါ တယ် လေ့လာသွား ပါ တယ်
nge(ngenatural@gmail.com): ငယ်လဲPHP ကို အခုမှ လေ့လာ နေတာပါ ..ကူညီကြပါ နော်
newgas: အရမ်း ကျေး ဇူး တင်တယ် ဗျာ အခု လို မြန်မာ တွေ လေ့လာဖို့ siite လေး တင်ထား ပေး တာ
ကောင်း ကျော်: php နဲ့ ကျွန် တော် အခုကစပြီး တွေ့ ပါ ပြီ
sora: ကျွန် တော်PHP ကို အခုမှ စတင်ပြီး လေ့လာသူပါ ...PHP ကိုကျွမ်း ကျွင်စွာတက် လိုပါ တယ် ... မေး က sorahackcrack(at)gmail.com ပါ ကူညီကြပါ အုံး
thaelinn: i so like this site.
yarzarmin: love to read it
thaelinn: want to know about css
khaing: ဟဟ...... ဖြေလဲ ဖြေကြဘူး
khaing: bal thu ma lae phay kya buu har
ိခိုင်: ပြောပြကြ အုန်း နော်.....
ိုခိုင်: သိချင်တာ တွေ မေး ရင်ဘယ်သူက ဖြေမှာ လဲ.....ခုမှ ဒီဝက်ဆိုင်ကိုစကြည့် တာ လေ.....
ုခိုင်: ဒီဝက်ဆိုက်ကphp.... အတွက် ပဲ သီး သန့်လုပ်ထား တာလား
sakarwarpwint: I m quit interest it .Thank anyway
sakarwarpwint: wow,i think this site is the most precious for beginner